Maareeyaha Faylka Dino: Maareeye feyl miisaanka yar ayaa ku qoran Qt | Laga soo bilaabo Linux
Maareeyaha Diiwaanka Dino: Maareeyaha feylka miisaanka culus ee lagu qoray Qt
Maareeyaha Faylka Dino (DFM) waa a Maamulaha faylka ku qoran Qt, kaas oo ballan qaadaya inuu noqon doono mid fudud oo shaqeyn doona. In kasta oo horumarintiisu wali ku jirto marxalad aad u horeysa, haddaba waa mid si dhammaystiran loo isticmaali karo oo aan loo baahnayn in la sheego, is dhexgalka KDE o FeerQT waa heer sare
Dino waa dhakhso, waxay leedahay tabs iyo xitaa tifaftiraha qoraalka isku dhafan. Waxaa gabi ahaanba lagu xakamayn karaa tuuryo kumbuyuutareedyo, oo aan ku abuuri karno fayl, ku abuuri karno isku xirnaan calaamadeysan, ku abuuri karno waxqabadyo caado ah, kuna shaqeyn karno faylalkayaga.
Waxay leedahay qaab muuqaal aad u fudud oo kuu oggolaanaya inaad ku soo bandhigto fayl qaab geed ah. Tabsada waxaa lagu dhejin karaa xagga sare ama hoose dhibaatada kaliya ee ay leedahayna waa in ay isticmaasho dhowr Mb oo ka badan Thunar y Nautilus iyadoo hal daaqad / tab furan yahay.
Koodhka ilaha mashruuca waxaa laga heli karaa iskuxiraha soo socda http://dfm.sourceforge.net/ nasiib wanaagna annaga, waxaan ku tijaabin karnaa inta badan kuwa ugu caansan ee tan iyo markii ay ku jirto meelahooda rasmiga ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » Maareeyaha Diiwaanka Dino: Maareeyaha feylka miisaanka culus ee lagu qoray Qt
Wanaagsan, waan xiiseynayaa - in kastoo Dolphin uu yahay biraawsar fayl weyn Waxaan doonayaa inaan arko haddii ay ku taal Arch AUR.
Way kufiicantahay qofkasta oo raba inuu mandiil la shaqeeyo maamule qt fudud.
Hmm… haddii tab uu cuno in ka badan Nautilus, uma maleynayo inay si khafiif ah u fududahay.
Ma aqaano inay tahay isbeddelku, laakiin mar kasta oo dadku isku dayaan inay sameeyaan maamuleyaal faylal khafiif ah, oo leh sifooyin yar ama qarsoodi ah, oo ka dayanaya cuqdad ka timaadda maareeyaha faylka osx, raadiyaha ...
Farahaaga iskutallaab si aysan waxaas oo kale u dhicin 😐
Waxaan raadinayay bun file manager mudo dheer waxbana ma ahan, ugu dambeyn markasta waa inaan ku laabtaa pcmanfm. Aynu aragno haddii ay nasiib jirto Dino!
Lagu daray liiskeyga barnaamijyada miisaanka fudud ee goorta uu RazorQt qaangaarayo… 🙂
Waxaa jira mid quruxsan oo qtfm ah
Taas waxaan u isticmaalayaa Razor-Qt xD
Waa inaan isku dayno inaan aragno sida ay u shaqeyso. Waxay ku habboonaan laheyd feerada, oo aan dhowaan tijaabiyay, iyadoo weli ay fog tahay, waa arrin rajo leh.
Sida kaliya ee aan ujeclahay maareeyayaasha feylasha fudud ee anfacaya, ka hor intaanan ku dhegin FD, waxaan isticmaali jiray taliyaha Tux. Waa inaad tan tijaabisaa si aad u aragto sida ay ku socoto Trisquel.
<° Ciyaaraha tooska ah maanta !!